Dagaal aad ba’an ayaa ka socda dhulka Soomaali Galbeed
Buluugleey July 14, 2005
Dagaal aad ba’an ayaa ka socda dhulka Somali Galbeed, gaar ahaan Jigjiga iyo Raaso. Dagalkan ayaa u dhaxeeyaa laba beelood ee wada dagta dhulka Somali Galbeed.
Dagaalkan ayaa ka sii daraya afartii maalmood ee ugu danbeysay, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in uu ka bilawday markii ciidamda laad u hubeysan kasoo duleen dagmada Iimay bari ay werar kusoo qadeen bundada oo fariisin u ahayd cidamada Iimayda galbeed.
Dagaalkan oo weli socdo ayaa waxaa ku dhintay dad kor udhaafay 400 oo iskugu jira caruur iyo dad waaweyn intaa in kabadanna waa ay ku dhawacmeen. Ilaa hadda ma jirto cid u gurmatay daweynta dadka ku dhaawacmay dagaalka oo la sheegayo in badankooda ay aad ildaranyihiin.
Dagaalkan ayaa aad uga ballarnaa dagaldii ka dhici jiray dhulka Soomali Galbeed intii ka danbeysay dagaalkii 1977. Waxaa wararku sheegayaan in labada dhinac isku adeegsanayaan hubka cul-culus ee saaran gawaarida dagaalka ee loo yaqaano tiknikada.
Labadan belood ee dagalmaya waxay horay ugu dagalmeen dagmada Lagahidda, Salxaad, Garbo, Carmale, dhgaxmadow, laab iyo dhulal kale oo far badan.
Dawladda Ethiopia oo sida la ogsoonyahay ka danbeysa collaadan mudosoo jiitamaysay oo u dhaxeysa labada beelood ee Soomaaliyeed ayaa ilaa hadda xukuumada Mile Zanawi wax hadal ah kasoo sarin. Taasina waxay daba joogtaa cadowtanimada ay u hayso dadka Soomaaliyeed ee dhiigooda qubanaya.